Uhlaselo lobunqolobi lwamaSilamsi kwiindawo ezintandathu eVienna | Apg29
Uninzi lwabantu abaswelekileyo nabenzakeleyo luxeliwe. Omnye wabanqolobi uye waqhushumba ibhombu yokuzibulala.
Kule vidiyo, umbulali ubonwa edubula.
Hayi kwiintsuku ezininzi ezidlulileyo, uhlaselo eyoyikekayo Muslim abanqolobi kwenzeka kwicawa yamaKatolika e Nice .
E-Avignon, kwi-250 yeekhilomitha ukusuka eNice, indoda yamaSilamsi yadutyulwa yafa emva kokuhlasela isitshixo ngokuchasene namapolisa aliqela.
Uhlaselo lwabanqolobi abangamaSilamsi eVienna
Namhlanje, kuye kwakho olunye uhlaselo lobunqolobi lwamaSilamsi . Ngoku eVienna kwiindawo ezintandathu. Uninzi lwabantu abaswelekileyo nabenzakeleyo luxeliwe.
Ipolisa elalikhusele indlu yesikhungu esixekweni lidutyulwe kwaye linobungozi obusongela ubomi. Omnye umenzi wobubi kufuneka abhubhile kwaye omnye kufuneka abaleke. Omnye wabanqolobi uye waqhushumba ibhombu yokuzibulala.
Uhlaselo luyaqhubeka ngexesha lokubhalwa. Aliqela aswelekileyo. Uninzi lonzakele kakhulu kwaye uninzi lufumana unyango esibhedlele .
Olu hlaselo luchazwa njengolwabanqolobi kwaye kukholelwa ukuba lwenziwe ngababulali abaninzi.
NguYesu kuphela onokusindisa kwaye ahlangule
Xa uhlaselo lwabanqolobi eNice naseAvignon lwenzeka, ndabhala:
Abantu bayamdinga u Yesu Krestu wase Bhayibhileni. Emva koko kuya kuphela inzondo, ukubulala nobundlobongela. NguYesu kuphela onokusindisa kwaye asindise kwaye axolele izono zabantu!
Nditsho la mazwi namhlanje.